NextsChain Uru Isi - Ihe Nweta Na-esote
Isi ihe Chapụta nkọwa
Mbupu Ọsọ & Efu Ọ na-ewe ihe dịka ụbọchị 5 - 8 iji ruo US, ụbọchị 3-8 gaa Japan, Korea, Singapore, Malaysia. Ihe dị ka ụbọchị 4 - 10 iji ruo Canada, Australia, Mexico, ma ọ bụ mba EUR.
Omenala mbukota & Mbọn Hazie akara ngosi gị na ngwaahịa gị. NextsChain na-akwado OEM & ODM nhazi nke akara ika gị na igbe igbe gị.
Otu-Kwụsị Dropshipping Anyị na-enye ezigbo ngwaahịa maka ire ere. Mgbe ị nwesịrị ahịa, ihe niile onye ọ bụla ga-eme bụ ịkwụ ụgwọ na NextsChain ga-emezu iwu gị. Mgbe ahụ, anyị ga-ebuga ngwungwu gị site na iji ụzọ mbupu ngwa ngwa, ma zipu nọmba nsuso na iwu gị. Ikwesighi ime ihe obula. Dịka eziokwu, ị ga-echekwa ihe dịka 90% nke oge gị. Kwesighi ichegbu onwe gị banyere ngwakọ, oge mbupu ogologo ma ọ bụ na-egbochi akaụntụ Aliexpress gị.
Mee Ọsọ Ngwa NextsChain na-enye gị ohere itinye 100 nke iwu na nkeji, karịa ngwa ọrụ ọ bụla! Chekwaa oge ma nweta ezigbo ọrụ na onye mmekọ AliExpress dropship!
Ọtụtụ nde ngwaahịa ka mma Ndị ahịa ga-enwe ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa dị elu ma họrọ site na plethora nke ihe karịrị ngwaahịa 500,000 na ọnụ ahịa ahịa ahịa. NextsChian na-enyekwa Mmeri ngwaahịa na ngwaahịa Trending iji nyere ndị ahịa anyị aka ịzụ ahịa azụmaahịa ha nke ọma.
Iwu Nmezu Onwe-ya Anyị bụ naanị pịa ka ị ghara imezu iwu gị niile. Anyị ga-ebu akara njikwa, nkwakọ ngwaahịa na mbupu maka ndị ahịa gị ozugbo.
Ngwugwu ngwugwu & Jikwaa Site na sistemụ nyocha ngwugwu ọgụgụ anyị, NextsChain ka ị jikwaa ngwungwu gị nke ọma, ị nwere ike ịchọpụta ebe ngwugwu gị na mgbe ha ga-eweta. Iji zere ọtụtụ ndị ahịa na-eme mkpesa ma chekwaa oge dị ukwuu.
Buck Dezie Nkwado NextsChain na-enye mma na mfe iji Buck edit tool ka ị jikwaa ngwaahịa gị Ndepụta rụọ ọrụ nke ọma na obere oge. Nwere ike ịnwekwu oge ị paya ntị na ahịa gị na ndị ahịa azụmaahịa ndị ọzọ.
Auto Ndepụta Ngwaahịa & efu Jikwaa Ọrụ njikwa ngwa ahịa na-arụ ọrụ ozugbo, yana mmelite na-akpaghị aka ọnụ na nkwupụta site na iwu. Ọ bụ nnukwu ihe ọzọ na AliExpress
Tinyekota Oberlo Ọ bụrụ n’ị na-azụ ahịa azụmaahịa na oberlo tupu. anyị enweghị ike inyere gị aka belata oge nnyefe na mkpokọ omenala & ịkọ ngwaahịa gị, kamakwa nyere gị aka ibubata ngwaahịa sitere na oberlo ruo NextsChain na ngwaahịa jikọtara naanị na ịpị aka ole na ole kama idetuo otu otu.
Ebighi-ebi Free Plan Anyị na-enye atụmatụ ebighi ebi
Design na-anabata NextsChain App nwere ezigbo azịza imewe, rụọ ọrụ nke ọma na ama gị, Tebụl ma ọ bụ PC compuer. ị nwere ike ijikwa azụmahịa azụmaahịa gị n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.